Amakhodi E-elekthronikhi Igumbi Eliphephile Ngamarekhodi angu-200 K-FG800
Idizayini eyingqayizivele, ehlangene, idrowa lokuvula eliphezulu liphephile uma uzama ukonga isikhala. Ifakwe emakhondweni noma ku-nightstand, le sefu ihlala kuze kube yi-laptop eyi-15 ”kanye nolunye uhla lwezinto eziyigugu. Isici sokuvula esiphezulu sivumela ukufinyelela okulula nokusethwa ngumsebenzisi, ukukhiya ikhodi kwamadijithi ama-4 futhi kuvuleke okuphephile.
Amasefa ezokuphepha akwaMde akhiwe kusetshenziswa ubuchwepheshe besimanje ukuthuthukisa ukuphepha nokusebenziseka kalula kwezivakashi zehhotela. Amasefa edijithali asebenziseka kalula, ahlinzeka ngokuphepha okuphezulu futhi anikwe amandla amaprosesa akamuva akamuva.
I-Master Code's Master Code ne-Override Key yokufinyelela okuphuthumayo.
Ikhiphedi ye-LED ebonakala ngabasebenzisi abaningi.
Ikhodi yephini yesihambeli enamadijithi angu-4-6 ngokusetha kabusha lapho umnyango uvulekile.
Isexwayiso sesixwayiso sokubukwayo esiphansi.
I-Optional Hand ibambe umzila wokucwaningwa kwamabhuku ngezindleko ezingeziwe, okufaka ukuvuleka kokugcina okungu-100 kwesisefo.
Usuku lungahlelwa ukuvumela ukulawulwa kokucwaningwa kwamabhuku ukusetshenziswa nesikhathi / usuku isitembu.
Kunikezwe ngamabhethri ane-alkaline angama-4 x AA.
Ifanele ukugcina iningi lamakhompyutha aphathekayo namathebulethi phakathi kwezinye izinto eziyigugu.
Kungaboshwa ngokuphepha nge-base noma ngemuva ukuya phansi noma odongeni (kulungiswa ikhithi).
Izimbobo Pre-yamba base futhi odongeni ezingemuva ephephile.
Kunikezwe ngamabhawodi wokulungisa ukuvikela odongeni lwezitini noma phansi kokhonkolo.
Beka indawo ephephile futhi umake amaphuzu wokubhola ngokusebenzisa izimbobo zangaphambi kokumba.
Susa okuphephile futhi wenze izimbobo usebenzisa i-drill kagesi ngensimbi yokubhoboza yokwakha.
Beka emuva kuphephile endaweni, faka amabhawodi bese uqinisa ukuze uvikeleke.
Amabhawodi awakwazi ukuphazanyiswa ngaphandle uma umnyango ophephile uvulekile.
Ngaphambilini: Ibhokisi Eliphephile Lehhotela Elibekiwe Ledijithali Eline-Laptop Size K-BE200H
Okulandelayo: I-Factory Price Digital Digital Laptop Ephephile Yegumbi Lamahhotela K-BE200
Amarekhodi 200 Ibhokisi Eliphephile
Amakhodi E-Electronic Safe Box
Ibhokisi eliphephile le-Electronic Lock
Igumbi Safe Box
Ibhokisi Eliphephile Lokuvula
Digital Key Safe Box , Electronic Office Safe Box , Small Fingerprint Safe , Manzi Cash Ibhokisi , Small Usizo Ihhotela Safes Futhi Safe Idibhozidi Amabhokisi , Semi-Conductor Mini Bar For Hotel Room , I- Zonke Imikhiqizo